နေလင်းအောင်: အချစ် နှင့် လက်ထပ်ခြင်း
အချစ် နှင့် လက်ထပ်ခြင်း
“မင်းရဲ့မေးခွန်းကို ဖြေပေးဖို့အတွက် ဟိုဂျုံခင်းဆီသွားပါ။ အကြီးဆုံး ဂျုံတစ်စေ့ကိုရွေးယူပြီး ပြန်လာပါ။ ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ မင်းဟာ ဂျုံခင်းထဲကို တစ်ကြိမ်သာ ဖြတ်သွားရမယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြီး ခူးဆွတ်လို့တော့ မရဘူးနော်”
ကျောင်းသားဟာ ဂျုံခင်းဆီသွားလိုက်တယ်။ ပထမဂျုံပင်တန်းထဲ သူဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ ကြီးမားတဲ့ ဂျုံတစ်စေ့ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်နေရာမှာ ဒီထက်ပိုကြီးတဲ့ ဂျုံတစ်စေ့ ရှိချင်ရှိနိုင်တယ်လို့ သူ စဉ်းစားလိုက်မိတယ်။
အဲဒီနောက် ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ ဂျုံတစ်စေ့ကို သူတွေ့လိုက်ပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်ပိုကြီးတဲ့ ဂျုံတစ်စေ့က သူ့ကို စောင့်နေနိုင်သေးတယ်လို့သူထင်နေမိတယ်။
ဂျုံခင်းတစ်ဝက်ကျော် ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒီဂျုံစေ့ဟာ သူအရင်တွေ့ခဲ့တဲ့ ဂျုံစေ့လောက် မကြီးဘူးဆိုတာ စတင် သဘောပေါက်လာတော့တယ်။ အကြီးဆုံးဂျုံစေ့ကို သူ လွှဲသွားကြောင်း သိတဲ့အခါ နောင်တရလာတယ်။
ဒါနဲ့ သူဟာ ဆက်လက်ရှာဖွေခြင်းမပြုတော့ဘဲ လက်ဗလာနဲ့ ဆရာ့ဆီိ ပြန်လာပါတယ်။
“အချစ်ဆိုတာ အဲဒီလိုပဲ။ မင်းဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အချစ်ကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို မင်းလွဲသွားကြောင်း နောင်တစ်ချိန်ရောက်မှ သဘောပေါက်လာတယ်”
“ဒါဆိုရင် လက်ထပ်ခြင်းကရော...”လို့ ကျောင်းသားကမေးပြန်တယ်။
“မင်းရဲ့အမေးကို ဖြေဖို့အတွက် စပါးခင်းဆီသွားလိုက်ပါ။ပြီးရင် အကြီးဆုံး စပါးတစ်စေ့ယူပြီး ပြန်လာပါ။ ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ မင်းဟာ စပါးခင်းထဲကို တစ်ကြိမ်သာဖြတ်သွားရမယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြီး ခူးဆွတ်လို့တော့ မရဘူးနော်”
ကျောင်းသားဟာ စပါးခင်းဆီသွားလိုက်တယ်။ ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ သူဟာ အရင်အမှားမျိုးမလုပ်မိဖို့ ဂရုစိုက်တယ်။ စပါးခင်းအလယ် ရောက်တဲ့အခါ သူ့စိတ်ကျေနပ်လောက်တဲ့ အလယ်အလတ် စပါးစေ့တစ်စေ့ ခူးဆွတ်ရင်း ဆရာ့ဆီ ပြန်လာပါတယ်။
“ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ မင်းဟာ စပါးစေ့တစ်စေ့ ခူးခဲ့တယ်။ မင်းဟာ သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ စပါးတစ်စေ့ကို ရှာဖွေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအစေ့ဟာ မင်းရခဲ့သမျှ အကောင်းဆုံးအစေ့လို့ ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတယ်။ လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ အဲဒီလိုမျိုးပါပဲ”
ကျွန်တော်တို့ဟာ အကောင်းဆုံးအချစ်ကိုတွေ့ဖို့၊ အကောင်းဆုံး အချစ်ကိုရရှိဖို့ ရှာဖွေနေခဲ့ကြတယ်။ ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့ အကောင်းဆုံးအချစ်ကိုတော့ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မကြိုးစားဘဲ ဒီထက်ပိုကောင်းမယ်ထင်တဲ့ အချစ်ကို ဆက်လက်ပြီး ရှာဖွေနေကြတယ်။ နောင်တစ်ချိန်ရောက်မှ ကျွန်တော်တို့ဟာ အကောင်းဆုံး အချစ်ကို လက်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း သိမြင်လာတော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ လက်ထပ်ဖို့အတွက် ကိုယ်ရဲ့ဂုဏ၊်ပညာနဲ့သင့်တော်သူတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေကြပါတယ်။ အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမယ့် သင့်တော်သူတစ်ယောက်ကို တွေ့တဲ့အခါ လက်ထပ်လိုက်တော့တယ်။
ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေပြီး လက်ထပ်မှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ချစ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေပြီး လက်ထပ်မှာလား။ ဘယ်လိုလူမျိုးကို လက်ထပ်သည့်ဖြစ်စေ၊ သူဟာ ကိုယ့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ခံယူချက်နဲ့ တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးမယ်ဆိုရင်တော့ သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Ref; Difference in Love and Mirrage by Unknown
Difference in Love and Mirrage
A student askedateacher, "What is love?"
The teacher said, "In order to answer your question, go to the wheat field and choose the biggest wheat and come back.But the rule is: you can go through them only once and cannot turn back to pick."
The student went to the field, go thru first row, he saw one big wheat, but he wonders… may be there isabigger one later.
Then he saw another bigger one…But may be there is an even bigger one waiting for him.
Later, when he finished more than half of the wheat field, he started to realize that the wheat not as big as the previous one he saw, he knew he had missed the biggest one, and he regretted.So, he ended up and went back to the teacher with empty hand.
The teacher told him, "This is love. You keep looking forabetter one, but when later you realize, you have already missed the person."
"What is marriage then?" the student asked.
The student went to the corn field, this time he is careful not to repeat the previous mistake. When he reach the middle of the field, he has picked one medium corn that he feel satisfy, and came back to the teacher.
The teacher told him, "This time you bring backacorn. You look for one that is just nice, and you have faith and believe this is the best one you get. This is mirage."
Posted by နေလင်းအောင် at 10:20 AM
Labels: ဘာသာပြန်ရသ, နှလုံးသားအာဟာရ
မေးလ်ထဲမှဖတ်ရူ့လိုပါက အီးမေးလ်လိပ်စာ ထားသွားပါ
နိုင်ငံတကာ ထူးခြားသတင်းများ (6)
ဘဝအောင်မြင်ရေး ဆောင်းပါးများ (3)
ဘာသာပြန် အလေ့အကျင့် (2)
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Like တစ်ချက် ကျွန်တော့်အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်
နေလင်းအောင် - နိုင်ငံတကာ သတင်း
နိုင်ငံတကာ ထူးခြားသတင်းများ (၁၁.၁၁.၂၀၁၂)
(၁) အသက်(၁၀၀)အရွယ်ရှိ အဘိုးအို အသက် (၁၀၆)နှစ်အရွယ်ရှိ အဘွားအိုနှင့်အတူ ဘိုးဘွားရိပ်သာတွင် အတူနေ လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်က ဘိုးဘွားရိပ်သာ...
ချန်နရာရဲ့ အကောင်းဆုံး အတွေးအခေါ် (၁၅)ခု
(၁) အခြားသူတွေရဲ့ အမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာရယူပါ။ သင့်အနေနဲ့ အမှားတွေအားလုံး ကိုယ်တိုင် လိုက်လုပ်ကြည့်ရလောက်အောင် အသက်မရှည်နိုင်ပါဘူး။ ...
အကောင်းမြင် စိတ်ဓာတ် မွေးမြူပါ
သင် တစ်နေရာရာ သွားချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာသွားချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ အဲဒီနေရာရောက်အောင် ဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာ သိထားရပါမယ်။ အဲဒီနောက် ဘယ်တော့ဆို ဘ...
ပညာနှင့် ကောင်းစွာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်း
(The Light of English Magazine, December, 2013) တစ်ခါတုန်းက လမ်းဘေးမှာ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်တွေ ရောင်းချနေတဲ့ လူတစ်ဦးရှိခဲ့တယ်။ သူဟာ စာမတတ...
သင့်IQ သိချင်သလား။ ဒါလေးကို ဖတ်ပြီး စက္ကန့်သုံးဆယ်အတွင်း ဖြေကြည့်ပါ။ နေလင်းအောင် တစ်ခါက အလွန်မြင့်မားတဲ့ အုန်းပင်တစ်ပင...
IQ Test (2) ရေချိုးကန်ဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်း
နေလင်းအောင် လူတစ်ဦးဟာ စိတ္တဇ ဆေးရုံတစ်ခုသို့သွားစဉ် ဒါရိုက်တာဖြစ်သူကို မေးလိုက်ပါတယ်။ “လူတစ်ဦးကို ဆေးရုံတင်သင့်၊မတ...
စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေဖို့ ပျော်ရွှင်တဲ့လူတွေ ပြုလုပ်တဲ့ အချက် (၉)ချက်
9 Things Happy People Do to Stress Less စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေဖို့ ပျော်ရွှင်တဲ့လူတွေ ပြုလုပ်တဲ့ အချက် (၉)ချက် (English for All...
( ၁၁) အပူပေးခံရတဲ့ ရွှေဟာ အလှဆင်ပစ္စည်း ဖြစ်လာတယ်။ နန်းဆွဲခံရတဲ့ ကြေးဟာ ကြေးနီချောင်းဖြစ်လာတယ်။ ထွင်းထုခံရတဲ့ ကျောက်တုန်းဟာ ...
မိမိဘဝကို စတင်ချစ်မြတ်နိုးလာစေဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)ခု
မိမိဘဝကို မုန်းတီးကြောင်း၊ မိမိမှာ ရှိတာတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမရှိကြောင်း ညည်းညူနေတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီသဘောထားတွေ သင့်မှာလည်း ဖြစ်ေ...
နေလင်းအောင် ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ဆရာ့ကိုမေးတယ်။ “အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲဗျ” ဆရာက ပြန်ဖြေပါတယ်။ “မင်းရဲ့မေးခွန်းကို ဖြေပေးဖို့အတွက...
ကျွန်တော်ဝင်ရောက် ရေးသားနေသော Social Networks များ
ဘလော့စာပေများ - ရွှေမြို့တော်
♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥ - မြန်မာချစ်သူမိသားစု
FOREVER FRIENDS ထာဝရသူငယ်ချင်းများ
♪♪ဖူးစာရှင်လေး♪♪ - http://www.fusarshinlay.net